Fanantenan'ny jamba - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Fanantenana ho an'ny jamba
Ao amin'ny Evanjelin'i Lioka, misy jamba miantsoantso. Te hisarika ny sain'i Jesosy izy ary mahazo fitahiana lehibe. Teny an-dalana avy any Jeriko dia nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo, mpangataka jamba, zanakalahin'i Timaeus. Izy dia iray tamin'ireo maro izay tsy nanantena intsony ny hahita fivelomana. Izy ireo dia niankina tamin'ny fahalalahan-tanan'ny olona hafa. Heveriko fa ny ankamaroantsika dia zara raha afaka mametraka ny tenantsika amin'ity toe-javatra ity mba tena hahafantatra hoe nanao ahoana ny hoe Bartimeo ary nangataka mofo mba ho velona?
Jesosy dia nandeha namaky an'i Jeriko niaraka tamin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. “Rehefa nahare azy ireo i Bartimaeus dia nanao fikarohana hoe inona izany. Nolazain'izy ireo taminy fa efa lasa i Jesosy avy any Nazareta. Nihiaka izy: Jesosy, Zanak'i Davida, mamindrà fo amiko »! (avy amin'ny Lioka 18,36-38). Azany avy hatrany fa i Jesosy no Mesia. Mahavariana ny zavatra atolotry ny tantara. Niandry zavatra hitranga ilay lehilahy. Jamba izy ary tsy nisy zavatra azony natao hanovana ny toe-javatra niainany. Rehefa namakivaky ny tanànany i Jesosy dia nahafantatra azy avy hatrany ilay Mesia (Ilay irak'Andriamanitra) izay afaka manasitrana azy amin'ny fahajambana. Ka dia niantsoantso mafy izy mba hisarihana ny sainy, hany ka hoy ny vahoaka maro be taminy: "Mangina, mitsahora! Ny fanoherana anefa dia nanery ny fangatahany ilay lehilahy. "Nijanona Jesosy ary niteny: Antsoy izy eto! Nantsoin'izy ireo ilay jamba ary hoy izy taminy: Matokia, mitsangàna! Miantso anao izy! Dia nanary ny lambany izy, nitsambikina nankeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe: Inona no tianao hataoko aminao? Hoy ilay jamba taminy: Rabuni (tompoko) izay ho hitako. Hoy Jesosy taminy: Mandehana, ny finoanao no nanampy anao. Ary nahita azy avy hatrany izy ary nanaraka azy teny an-dàlana » (Marka 10,49-52).
Afaka miatrika toe-javatra mitovy amin'ilay an'i Bartimaeus ve ianao? Fantatrao ve fa tsy afaka mahita tena irery ianao, dia mila fanampiana? Mety ho maheno ny hafatry ny olona hafa ianao hoe "Milamina - mavesatra aminao i Jesosy." Ny hafatra sy ny fihetsik'ireo mpianatr'i Jesosy sy mpanara-dia an'i Jesosy dia tokony hanao hoe: "Habakoka ihany no herim-po, mitsangàna! Miantso anao Izy! Ianao aminy! »
Efa hitanao ny tena fiainana tadiavinao, "Jesosy, Tomponao!" Tsy vitan'ny hoe manome an'i Bartimeo jamba i Jesosy, fa fahasoavana sy famindram-po ho anao ihany koa. Henony ny hierenanao ary omeny anao ny fomba fijery vaovao hahalalanao hoe iza ianao.
Ohatra tsara ho an'ny mpandimby i Bartimaeus. Niaiky ny tsy fahaizany manokana izy, natoky an'i Jesosy ho afaka hanome ny fahasoavan'Andriamanitra ho azy, ary nanaraka azy toy ny mpianatra raha vantany vao naharihary azy.